Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Oliver Skipp Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Anyị Oliver Skipp Biography na -agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna, ezinụlọ, nwanne nwanyị (Charlotte), nwanne na enyi nwanyị/nwunye ya ga -abụ. Nke ka nke bụ, Skipp's Web, Life Personal na Net Worth.
Na nkenke, anyị na -emebi akụkọ ndụ nke Polymath, onye na -agbapụ na football, ga -abụ ihe ọzọ - Mr Patterson, onye nkuzi PE ya kwuru. Skipp dị mma na ọsọ 1,500m, Dart na Rugby. Ọzọkwa, ọ bụ ezigbo mgbakọ na mwepụ, Economist na Historian.
Akụkọ ndụ Lifebogger nke akụkọ Skipp na -amalite site n'oge ọ bụ nwata - ruo oge ọ ghọrọ ihe ịga nke ọma na egwuregwu bọọlụ mara mma.
Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ọdịbendị gị na ọdịdị nke Oliver Skipp's Bio, anyị chere na ọ dabara adaba igosipụta mmalite ndụ ya na ihe ịga nke ọma. Lee, ebe ngosi nka nke njem ndụ Skipp.
Oliver Skipp Biography - Lee ndụ nwata ya na akụkọ ịga nke ọma.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ na-egwu egwu dịka nwoke 30. Ikike teknụzụ dị mma nke Oliver nwere iji mebie egwuregwu wee merie bọọlụ - bụ ihe akaebe na - hype gbara ya gburugburu ziri ezi.
N'agbanyeghị otuto niile, anyị na -achọpụta - na ọ bụ naanị ndị egwuregwu ole na ole gụrụ obere akụkọ Oliver Skipp's Biography. Lifebogger dị - ịgwa gị akụkọ ya. Ugbu a, n'egbughị oge gị, ka anyị bido.
Akụkọ nwata bụ Oliver Skipp:
Maka ndị na -amalite Biography, ọ na -ebu aha otutu - Skippy. A mụrụ Oliver Skipp n'ụbọchị 16 nke Septemba 2000 nye ndị mụrụ ya, na Welwyn Garden City, Northern London.
Ihe na -etolite dị ka:
Nnyocha nwere na onye ọkpọ egwuregwu etiti dị ike etinyeghị afọ mbụ ya naanị. Nke pụtara na ọ bụghị naanị nwa nne ya na nna ya. Ya na ụmụnne ya toro - nwanne nwoke nke okenye (Will) na nwanne nwanyị aha ya bụ - Charlotte (Akụkọ egwuregwu).
Ndị a bụ nwanne Oliver Skipp n'oge mmalite ha. Will, nwanne ya nwoke nke okenye, tọrọ Charlotte.
Mgbe ọ bụ nwata, Skipp zụlitere omume ịnakọta kaadị Match Attax. N'ịbụ onye ndị egwuregwu bọọlụ riri ahụ nke ukwuu, Oliver na -eto eto hụrụ na kpakpando Tottenham niile bụ akụkụ nke nchịkọta ya. N'ezie, Skipp chịkọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị egwuregwu bọọlụ niile na Premier League - n'oge ahụ.
Ịhụnanya Oliver maka ịgba bọọlụ mepụtara omume ya nke ịnakọta kaadị Match Attax.
N'ajụjụ ọnụ a na webụsaịtị egwuregwu dabere na ndenye aha The Athletic, onye ọkpọ egwuregwu na-alụ ọgụ kọwara akụkọ nchịkọta kaadị ya;
Enwetara m kaadị Match Attax n'ime 2005, 2006 na 2007.
Nke ahụ bụ afọ atọ ma ọ bụ anọ nke ịnakọta kaadị maka onye ọ bụla na -egwu egwuregwu Premiya.
Ihe riri ahụ nke kaadị Attax bụụrụ ndị mụrụ m nsogbu. Azụlitere m àgwà nke ịchụsasị kaadị m - n'ala niile.
Ọzọkwa rịba ama na mgbe ọ bụ nwata, Oliver Skipp mere ka ndị Spurs na -agba bọọlụ efe arụsị - Luka Modric na Scott Parker. Dị ka akara aka ga-enwe ya, nke ikpeazụ jisiri ya ike n'okpuru ọkwa 18.
Nzụlite ezinụlọ Oliver Skipp:
Ihe mbụ ịghọta banyere ezinụlọ ya bụ eziokwu na nne na nna ya - bụ ndị nwere ọgụgụ isi mmụta. Dabere na nchoputa, Papa Oliver Skipp bụ ọkachamara na -edekọ ego, ọkọ akụkọ ihe mere eme, akụnụba na mgbakọ na mwepụ. Nke a bụ ebe o ketara ọgụgụ isi ya.
Onye Spurs midfielder kwuru otu oge na ya nwetara ikike iche echiche nna ya - onye ọ na -ekwu na ọ nwere ọgụgụ isi karịa ya. N'aka nke ọzọ, nne ya gụrụ akwụkwọ nke ukwuu - bụkwa onye na -arụ ụlọ nke na -etinye oge dị ukwuu na -elekọta ụlọ na ezinụlọ ya.
N'ịgakwuru ụmụnne ya, anyị hụrụ na ha nwekwara ọgụgụ isi. Weebụsaịtị egwuregwu ịdenye aha (The Athletic) gosipụtara (n'ajụjụ ọnụ) na nwanne Oliver Skipp nwere ọgụgụ isi. Mgbe ọ na -ede Bio a, ọ bụ nwa akwụkwọ nke akparamaagwa na King's College London.
Mmalite ezinụlọ Oliver Skipp:
Dị ka aha ya pụtara, Welwyn Garden (ebe o si) bụ obodo nke nwere ubi. Nke a bụ ebe ezinụlọ Oliver Skipp nwere mgbọrọgwụ ha. Foto dị ebe a, ọ bụ obodo dị na Hertfordshire, England - kilomita 20 (kilomita 32) n'ebe ugwu London.
Mmalite ezinụlọ Oliver Skipp - AKPARA.
Welwyn Garden City bụ ụlọ UK maka nri mmepụta ọka- Shredded Wheat. Ugbu a, ka anyị gwa gị ihe gbasara obodo mmalite Oliver Skipp. Anyị na -akwado na David James MBE - onye mgbaru ọsọ England lara ezumike nka sitere na Welwyn Garden City.
Ezinụlọ David James sitere na Welwyn Garden City.
Oliver Skipp Mmụta na Nrụpụta Ọrụ:
Na -abịa site n'ụlọ ọgụgụ isi, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya mere nke ọma n'ọmụmụ ihe ha. Oliver Skipp gara ụlọ akwụkwọ Richard Hale na Hertford-njem nkeji iri na anọ site n'ụlọ ezinụlọ ya. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, o nwetara akara mmụta GCSE dị egwu tupu ya echee bọọlụ (oge niile).
Ezinaụlọ Oliver Skipp bụ ihe dịka nkeji iri na anọ iji ruo ụlọ akwụkwọ ya, na Hertford.
Ikekwe, na -ekpebi site n'ihe onye nkuzi mbụ ya Mr Patterson kwuru, Oliver gaara arụ ọrụ na egwuregwu ọzọ - ọ bụghị ịgba bọl. Na nkenke, ọ bụ ya kacha mma n'egwuregwu ndị ọzọ.
Laa azụ n'ụbọchị ahụ, onye ọ bụla hụrụ Oliver Skipp dị ka onye na -anụ ọkụ n'obi n'egwuregwu na polymath. N'ezie, nwata nwoke ahụ nwere ike ịgba bọọlụ rugby, nwee amamihe na ọsọ mita 1,500, mara ezigbo mma na tenis, Dart na Cricket.
N'ihi nke ahụ, onye ọ bụla nọ na Richard Hale kpọrọ Skipp dị ka polymath egwuregwu. Ruo ụbọchị, mmezu egwuregwu ya ka na -aga n'ihu na akụkọ ụlọ akwụkwọ ya.
Akụkọ Oliver Skipp Football:
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, nwata ahụ chọtara agụụ maka ịgba bọl. O debanyere aha ya na Bengeo Tigers iji mee anyị nke nka. Nke a bụ agụmakwụkwọ bọọlụ obodo na Hertfordshire. Maka Oliver, ọ dị mfe igwu egwu ebe ahụ n'ihi na agụmakwụkwọ dị nso na Richard Hale - ụlọ akwụkwọ ya.
Tupu isonye na agụmakwụkwọ ọkachamara, nwata ahụ (dịka Ademola Lookman) kacha mma na Bengeo Tigers bọọlụ nke Sọnde. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ nwetara nrite mbụ ya.
Edere ya dị ka kpakpando kachasị mma na Bengeo Tigers, mmezu ya na agụmakwụkwọ Hertfordshire dọtara ndị egwuregwu bọọlụ Tottenham. Njikwa klọb ahụ kwenyesiri ike na nne na nna Oliver Skipp ime ka nwa ha sonyere ha site na nnwale.
Ndụ na Spurs Academy:
N'ịgbaso ikpe na -aga nke ọma, Oliver Skipp sonyeere Tottenham Hotspur agụmakwụkwọ n'afọ 2013. Nke a bụ foto mbụ anyị hụrụ ya - na uwe elu Tottenham n'akụkụ ndị otu ya.
Ị nwere ike ịhụ Oliver Skipp na foto a?
Laa azụ n'ụbọchị ahụ, Welwyn Garden City ruo Hotspur Way (ọnọdụ agụmakwụkwọ Spurs) bụ nkeji 26 - lee maapụ n'okpuru. N'ihe ọzọ iji mee ka ọ lekwasị anya, nne na nna Oliver Skipp kwere ka nwa ha nọrọ n'ụlọ ndị ọbịa - nso ebe ọzụzụ Tottenham.
Maka ọtụtụ kpakpando agụmakwụkwọ Spurs (dịka ọmụmaatụ Kyle Walker-Peters wdg) ndị mụrụ ha bi ebe dị anya site na ebe a na -azụ ọzụzụ, echiche ịnọnyere onye ọbịa bụ omenala.
Nrọ nke England:
Ka Skip na -etolite, enwere ọchịchọ siri ike a maka ndị otu mba, ọkachasị na -anọchite anya England na asọmpi. Ebumnuche ya kachasị mma bụ ime onye ọ bụla mpako - ọkachasị ezinụlọ ya ma nwee olile anya igosi na ọ nwekwara ike ịnapụta ndị nkuzi ya.
N'ime nyocha anyị, anyị chọpụtara - na Oliver Skipp n'akụkụ ndị mmadụ Jadon Sancho na Callum Hudson-Odoi nọ n'otu ndị ntorobịa England. Ya, ya na mmadụ ole na ole n'ime ụmụ okorobịa a, ghọrọ ọkaibe.
Ị nwere ike ịmata Callum Hudson-Odio na Jadon Sancho na foto a?
Oliver Skipp Biography - Ụzọ ama ama Akụkọ:
Mgbe iko mba ụwa nke 2018 FIFA gasịrị, nwata ahụ rụsiri ọrụ ike wee gụchaa akwụkwọ na Tottenham Hotspur agụmakwụkwọ. Maka ọ joyụ nke ezinụlọ ya, Oliver nyeere ndị Spurs aka imeri ma ọkachamara ya na Premier League mbụ - mgbe akpọrọ ya Mauricio Pochettino.
Ịnọ n'otu pitch na Christian Eriksen nwere obere ihe ijuanya. Obi dị m ụtọ na ọ bịara ngwa ngwa ịmara echiche na kpakpando ndị a zuru ụwa ọnụ - Ben Davies (ezi enyi), Hugo Lloris na Fernando Llorente - onye ọ hụrụ dị ka nnukwu kpakpando bụ ndị nkịtị.
Dị ka Oliver Skipp si kwuo;
Ha bụ ndị nkịtị na ọ gaghị ewe gị oge ịmekọrịta ihe. Ha na mụ dị mma - Ben Davies ọkachasị.
Fernando Llorente nwere enyi na ụmụntakịrị niile mgbe ọ nọ ebe a.
O doro anya na ọ bụ ezigbo nna, n'ihi na ọ gabigala n'ọtụtụ nnukwu klọb.
Na Jenụwarị 2019, Skipp nwere mmasị na ndị na -akwado Tottenham. N'ọnwa ahụ, ọ n'akụkụ Nwa Heung-min nyere aka abụọ - na -ekwu Akụkọ BBC. Nke a bụ vidiyo egwuregwu ahụ nwere Serge Aurier (aka nri-azụ), Harry Kane na Fernando Llorente dị ka ndị na -enye goolu.
Oliver Skipp Bio - Bilie na Akụkọ Ama:
N'ịbụ onye gosipụtara onwe ya dị ka onye nwere ike ịnapụta elu ụgbọ elu, kpakpando etiti na -alụ ọgụ nwetara ụgwọ ọrụ ya. Maka ọ joyụ nke ezinụlọ Oliver Skipp, Tottenham gọziri nwa ha nwoke nkwekọrịta afọ atọ ọhụrụ-iji zere klọb ndị ọzọ izu ohi ya.
N'ịgbaso nkwekọrịta ahụ, Oliver chere na ọ bụ ya kacha mma BỤ Izere nọrọ na ịsọ mpi Pierre-Emile Højbjerg na Harry Winks. Kama, o were ohere mbinye ego nye Norwich.
Ndụ na ndị Canaries:
Ya na ezinụlọ ọhụrụ ya bịara ohere ndị ọzọ iji gosi na ọ bara uru. Skipp nyere aka na nhazi Norwich 4-2-3-1 n'akụkụ Kenny McLean na-eme ihe ngosi. Site na ndị Canaries, nwata nwoke dị umeala n'obi sitere na Welwyn Garden City gbara ihe mgbaru ọsọ mbụ mbụ ya.
Polymath - na -eme mmemme ọkachamara mbụ ya - lee oge mara mma maka nne na nna Oliver Skipp.
Ọtụtụ mgbe, ndị na -akwado Norwich na -eto Skipp mgbe niile maka mmekorita ya dị egwu Todd Cantwell na Emi buendia. Ọ ghọrọ isi okwu na ọrụ ya ịlụso na igbochi ndị mmegide.
Site na etiti Canaries zuru oke, Teemu Pukki ọ dịghị mgbe enyemaka nyere akara. Ọ kwụsịghị ebe ahụ. Skipp nyeere Norwich aka inwe mmeri, aha ya so na ndị otu PFA nke afọ 2021. Ebe a ka Oliver na -eme mmemme ugbu a Max Erọn na ndị ọzọ.
Skipp yiri ka ọ naghị echegbu onwe ya maka mmerụ ahụ ya ka ya na ndị otu egwuregwu na -eme mmemme mmeri Norwich.
Jose Mourinho stint na Spurs kwadoro ọtụtụ ụmụaka - ụdị nke Joe Rondon (CB), Japhet Tanganga (RM/CB) na Sergio Reguilón (LB). N'ezie ọ bụghị ndị mmadụ na -amasị Hichapụ Ali (AM), Danny Rose na Oliver Skipp.
Nuno Espírito Santo si mbata butere ọtụtụ nchekwube - ọkachasị maka Dele Ali. Ka ọ na -enyocha ndị egwuregwu ya ndị kwụrụ ụgwọ ha site na mgbazinye ego, Norwich Rise nke Oliver Skipp nwere obi ụtọ.
N'ezie, vidiyo a kọwara ihe kpatara Nuno Espírito Santo nyere Oliver Skipp ohere Spurs ọzọ.
Akụkọ ịga nke ọma Tottenham:
Ekele maka arụmọrụ preseason 2021/2022 dị ebube, Oliver Skipp gafere nnukwu ule mbụ ya. Ihe na -esote ya bụ ịnapụta ihe dị mma na mbido Spurs megide Manchester City. Maka ọ joyụ onye ọ bụla na -akwado Spurs na ezinụlọ ya, Skipp masịrị onye nkuzi ọhụrụ ya.
Skipp bụ onye isi İlkay Gündoğan na egwuregwu EPL mbụ ya n'okpuru Nuno - na -enyere ndị otu ya aka inwe mmeri.
Ọ nwere ike ịmasị gị ịmara na Skipp-site n'ụbọchị ahụ-kwadoro ọnọdụ ya dị ka onye bonafide so na ndị otu egwuregwu mbụ nke Spurs. Site na ngosipụta na -agbanwe agbanwe, enwere obere mmalite mmalite maka ụdị nke Moussa Sissoko - onye manyere ụzọ ya isonye Ndị Nate Chalobah Watford.
Obi abụọ adịghị ya, ndị na -akwado Spurs na -enwe obi ụtọ ịhụ otu nke ha - onye gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ - na -eto n'ụzọ ka ọ bụrụ akụkọ akụkọ klọb ahụ. Ndị ọzọ, dịka anyị na -ekwu maka Oliver Skipp's Biography, bụ akụkọ ugbu a. Ugbu a, ka anyị kpọga gị na ndụ mmekọrịta nke onye ọkpọ egwuregwu.
Ọnye na -bụ Oliver Skipp Dating?
Ebe anyị ji Spurs meere onwe ya aha, anyị kwenyere na ọ dị mma onye ọ bụla (ọkachasị ụmụ nwanyị) ịjụ ajụjụ ndị a;
Onye bụ enyi nwanyị Oliver Skipp? … Oliver Skipp alụọla? … Oliver Skipp enwere nwunye ma ọ bụ nwa?
Otu ihe doro anya banyere Oliver. Enweghị agọnarị eziokwu ahụ na ọmarịcha mma ya yana ịmụmụ ọnụ ọchị na -adọrọ adọrọ agaghị eme ka ọ nọrọ na ndepụta ọ bụla enyi nwoke nke nwa agbọghọ. Karịsịa ndị na -achọ ịbụ nwunye ya ma ọ bụ nne nne (nne ụmụ ya).
Ọnye na -bụ Oliver Skipp Girlfriend?
Mgbe anyị nyochasịrị ọtụtụ awa nke ịlele webụsaịtị ụwa niile, anyị hụrụ onye - onye nwere ike ịbụ enyi nwanyị Skipp. Ndị mgbasa ozi weghaara foto a mgbe Oliver Skipp na onye a sị na ọ hụrụ n'anya na -achọ ụlọ ịgbazite na Norwich.
Anyị sere onyinyo Oliver Skipp n'akụkụ nwanyị a - mgbe anyị na -enweta ụlọ na Norwich. Nke a nwere ike ịbụ enyi ya nwanyị ma ọ bụ nne ya?
Iji zere ikpughe ihu ha, ha abụọ kwesịrị ịkwado igwefoto. Ugbu a, ọ nwere ike bụrụ enyi nwanyị Oliver Skipp ma ọ bụ nwunye?… Ma ọ bụ naanị ikekwe, nne ya ?? Biko mee ka anyị nwee ike imelite akụkọ ndụ ya - ọ bụrụ na ị nwere nkọwa doro anya nke njirimara ya.
Oliver Skipp Ndụ Nkeonwe:
Ewezuga ihe omume ya n'ọhịa, anyị ga -eji ngalaba a gwa gị Eziokwu gbasara ndị egwuregwu bọọlụ na -arị elu na Polymath.
Nke mbụ, nwata ahụ dị umeala n'obi, dị nsọ ma dịkwa umeala n'obi. Ị nwedịrị ike ikwu ya site n'ọdịdị Skipp. Ndị a bụ agwa Kevin Patterson - onye nkuzi PE mbụ Oliver, kwadoro mgbe ya na The Athletic na -ekwu okwu.
Ọzọkwa, Oliver Skipp nwere agwa ihere nke okike a na ikike ịpụta nke ọma. Eleghi anya, onye na -agba bọọlụ nwere ike ịmasị Ngolo Kante, onye na -adịghị echegbu onwe ya banyere ihe ọ bụla.
Ịmụta egwuregwu ndị ọzọ:
Ọ bụ ka nka Skipp n'egwu Dart si malite. N'otu oge n'ụlọ akwụkwọ ya, enwere ọdụ ụgbọ mmiri ebe onye nkuzi PE na -akpọ ụmụ akwụkwọ ka ha tụọ maka ndekọ.
Eziokwu bụ, Oliver Skipp dị afọ 15 nke na-egwubeghị Dart tupu ya emebie ndekọ-yana ihe karịrị 100. Ọ dịghị ka ọ na-eme. Ọ nwere naanị onyinye eke nke ịbụ onye egwuregwu polymath.
N'ihi onyinye okike a, ọtụtụ ndị enyi Skipp dụrụ ya ọdụ ka ọ gaa ụzọ ọrụ ọzọ - kama ịgba bọl. N'ezie, nwata ahụ so ndị mụrụ ya kwurịta ya.
Skipp jụrụ echiche ahụ site na mkpebi njikọta nke bịara mgbe ya na ndị mụrụ ya kparịtachara. Ọ bụrụ na nne ya na nna ya kwadoro, nwa agbọghọ ahụ ga -abụ - ikekwe - bụrụ onye nrite ihe mgbaru ọsọ Olympic.
Ndụ Oliver Skipp:
yiri Bryan gil, Onye na -agbachitere Tottenham na -ahụ n'anya na -eleta osimiri na oke osimiri. Ikekwe ọ bụ ọgwụgwọ kachasị maka ihe obi Oliver Skipp chọrọ.
Na mpaghara ụdị ndụ ọ na -ebi, anyị na -akọwa Oliver Skipp dịka ọgwụ mgbochi zuru oke maka ibi ndụ dị oke ọnụ. Ọ (n'adịghị ka Neymar na Paul Pogba) bụ ụdị onye ọ na-esiri ike ibipute na soshal midia-kwuo obere okwu gbasara ikwu okwu afọ ojuju gbasara akụ na ụba ya.
Ndụ Oliver Skipp - AKPARA.
Ndụ ezinụlọ Oliver Skipp:
Maka nwa amaala Welwyn, inwe ebe ị ga -aga ogologo ụbọchị bọọlụ abụghị ihe ọzọ karịa ụlọ. N'ikwu nke a karị, inwe otu ndị mmadụ iji gosi ịhụnanya - mgbe ịnọ n'ụlọ - bụ Ezinaụlọ. Akụkụ a nke Bio anyị na -agwa gị gbasara ezinụlọ ya.
Banyere Oliver Skipp Nna:
Ewezuga ịbụ akaụntụ, Super Dad bụkwa ọkachamara n'ihe gbasara akụ na ụba na mgbakọ na mwepụ - nwoke maara nke ọma uru nkwukọrịta ezinụlọ dị. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na Skipp ketara ọgụgụ isi nna ya.
Ebe ọ nwetasịrị nnukwu akara mmụta GCSE, Oliver Skipp gara nke ọma n'ịmụ akụkọ ihe mere eme na akụnụba A-ọkwa niile-maka nduzi papa m. Nke a bụ oge ọ na -eme nke ọma n'ọtụtụ egwuregwu.
Mgbe ọ na -agụ akwụkwọ, kpakpando Spurs na -azụkarị ụtụtụ n'ụtụtụ wee were ehihie ya niile dee edemede akụkọ ihe mere eme ma na -agbagha n'echiche nke echiche akụ na ụba. Papa ya na -enye ya ọrụ na mpaghara ndị a.
N'ihi nkwurịta okwu ahụ dị mma ya na nna ya, Skipp hụrụ na isiokwu a dị oke egwu. Ugbu a, ka anyị gwa gị isiokwu ndị ọ nyochara maka ya.
Maka akụkọ ihe mere eme, Oliver dere ugboro atọ. Nke mbụ, o dere maka nrọ ndị Amerịka, malite n'afọ 1920 ruo n'afọ 2000.
Na -esote, Oliver dere banyere Akụkọ South Africa na apartheid. N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, o dere banyere Alaeze Ukwu Britain - n'ime narị afọ anọ gara aga.
Ọ bụrụ na ịmaghị, Skipp edekwara banyere ogbugbu John F. Kennedy (JFK). Ebumnuche ebe a bụ ịchọpụta ma ọ bụ n'ezie onye ha kwuru mere ya, ma ọ bụ igbu ya bụ nkata.
Site na nduzi sitere na Nna ya na-ahụ n'anya, onye na-agbachitere agbachitere kwuru okwu ndị a.
Banyere Oliver Skipp Nne:
Ọ bụ naanị otu onye n'ime ezinụlọ na -emechi egwuregwu nwa ya nwoke anya karịa onye ọ bụla ọzọ nọ n'ezinụlọ. Nne Oliver Skipp, n'agbanyeghị na ọ gụrụ akwụkwọ, anaghị arụ ọrụ. Ọ bụ onye na -elekọta ụlọ ma yie di ya, ya na nwa ya nwoke ka na -akpachi anya.
Dị ka nyocha anyị si dị, Mama Oliver Skipp bụ ihe kpatara ya na ezinụlọ ya ka ji ebi - ọbụlagodi dịka ọkachamara na Tottenham.
Naanị oge ọ hapụrụ ya bụ n'oge mgbazinye oge ya na Norwich. N'oge a, ya na ezinaụlọ kwabatara - ka GCSEs ya na Richard Hale gachara.
Oliver Skipp Nwanyị:
Charlotte bụ ọkà n'akparamàgwà mmadụ site na ọrụ - yana ọbụna nwee ọgụgụ isi karịa obere nwanne ya. Ọ na -eme ncheta ọmụmụ ya kwa ụbọchị 28th nke Nọvemba. A mụrụ nwanne nwanyị Oliver Skipp (Charlotte) n'afọ 1998 - nke pụtara na ọ tọrọ ya afọ abụọ.
Zute Nwanyị Nwanyị Oliver Skipp - Charlotte Skipp.
Eziokwu Oliver Skipp:
N'ịchịkọta Bio anyị, anyị ga-eji ngalaba a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara akụnụba na ndị hụrụ egwuregwu n'anya n'anya. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Eziokwu #1 - Echiche ya na Fantasy Football:
Otu ụbọchị, enyi Oliver Skipp zitere m nseta ihuenyo nke ndị otu Fantasy ya. Nwata nwoke ahụ kelere ya maka inye ya otu isi. Skipp zara, site n'ikwu;
Nsogbu adịghị, ọ ga -adị mkpa ka ị kpọpụta m n'òtù fantasy gị. Nke a bụ n'ihi na anaghị m enye gị ọtụtụ ihe!
Eziokwu nke abụọ - Kaadị FIFA na Egwuregwu:
N'adịghị ka ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ, ọ na -adịrị Skipp mfe iguzogide ọnwụnwa nke igwu onwe ya n'ụdị egwuregwu vidiyo FIFA kachasị ọhụrụ. O kwuru otu oge banyere mkpebi ya;
Ejibeghị m onwe m egwu egwu, mana ahụla m kaadị m. Enweghị m nsogbu.
Skipp kwuru na ụfọdụ ndị otu egwuregwu Spurs enwechaghị obi ụtọ na nke ha. Ọ nwere ike icheta ịhụ vidiyo nke Eric Dier na Davinson Sanchez na -elele stats ha ma meghachi omume na ọ dị obere - ọkachasị Dier.
Eziokwu #3 - Profaịlụ Oliver Skipp:
N'ihe banyere 2021, anyị na -ekpe ikpe ikike FIFA ya nke 85 dị ka ihe na -ekwe nkwa. Kedu ihe nke a pụtara? … Chora Ohia na Kalvin Phillips.
Eziokwu nke 4 - Okpukpe Oliver Skipp:
Anyị etinyela ihe na -adịghị mma - na -akwado ya ịbụ Onye Kraịst. Iji kpughee eziokwu ọzọ, aha mbụ ya na nke etiti - Oliver William - nwere ike bụrụ ihe na -egosi na nne na nna Oliver Skipp na -egosipụta onwe ha n'okpukpe.
Eziokwu #5 - Ihe ọ na -eche gbasara ime ụlọ Spurs:
Onye na -agbachitere agbachitere bụ ụdị nke na -amụ ihe, na -aghọta ma na -eme mgbanwe maka omume ndị ọrụ ibe ya. Na nkọwa ya na ndị otu Spurs ibe ya, Oliver kwuru na Serge Aurier bụ onye na -ada ụda nke ukwuu, nke kacha sie ike, na onye Spurs kacha bụrụ onye egwuregwu.
Na mgbakwunye, ọ na-ele àgwà Sonny [Son Heung-min] dị ka onye nwere ngwugwu ike-onye na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe niile ma na-enyere aka mgbe niile ime ka ọnọdụ onye ọ bụla dị elu.
Lifebogger kpughere tebụl a iji nye gị ozi dị nkenke gbasara Oliver Skipp.
Aha n'uju: Oliver William Skipp [
aha otutu: Skippy
Ụbọchị ọmụmụ: 16th September 2000
Age: 21 afọ na ọnwa 1.
Ụmụnne: Will Skipp (nwanne) na Charlotte Skipp (nwanne nwanyị nke okenye).
Ezinụlọ Ezinụlọ: Obodo Welwyn Garden, England
Ogo (ụkwụ na anụ ọhịa): 1.75 mita ma ọ bụ 5 ụkwụ 9 sentimita asatọ
Net Net (2021): Nde 1 nde
Onye nnọchite anya: Arete, Putney Bridge Road, London
Education: Ụlọ akwụkwọ Richard Hale, Hertford
Ọnọdụ egwuregwu: Onye na -agbachitere na Central midfielder
Skipp karịrị karịa onye na -agbachitere etiti. Ọ bụ klaasị ụwa-onye ọkpọ egwuregwu nwere ume na nnukwu atụmanya na klọb na bọọlụ mba ụwa niile. N'ihi ọdịnihu ya nke na -enwu gbaa nke ọma, ọtụtụ na -ahụ ya anya dị ka onye isi Spurs n'ọdịnihu.
Kemgbe ọ bụ nwata, Oliver Skipp ghọtara na ya kwesịrị ịpụ na mpaghara nkasi obi ya. Nke a bụ mpaghara na -akọwa ọmarịcha agwa ya Match Attax kaadị nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị egwuregwu bọọlụ niile - ọkachasị nke Tottenham. N'ịhapụ omume ochie ya, nwata nwoke ahụ gara nweta ọrụ ịgba bọọlụ.
N'ịghọta nkwa ya, agụụ na agụụ ime ya, nne na nna Oliver Skipp nyere ya nkwado niile ọ chọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma. Skipp bilitere n'oge agụmakwụkwọ ka ọ bụrụ onye na -eto eto Spurs kacha nwee nkwa.
N'ịbụ onye juputara n'ike, o nwere mmetụta dị mma na onye njikwa Tottenham mbụ, Mauricio Pochettino, onye gbara ajụjụ ọnụ kwuru na Skipp (18) na-egwu egwu dị ka nwoke dị afọ 30. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya, etu o siri tozuo n'otu ndị otu Tottenham n'okpuru Nuno Espirito Santo.
Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ ihe ncheta a na -atọ ụtọ gbasara onye egwuregwu bọọlụ nke na -anyakwa onwe ya dị ka polymath egwuregwu. Na Lifebogger, anyị na -agbasi mbọ ike maka nlekọta na izi ezi ka anyị na -enye akụkọ akụkọ gbasara ndị egwuregwu bọọlụ Britain.
Biko mee ka anyị mara site na ibe kọntaktị anyị - ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na -adịghị mma na Skipp's Biography. Ma ọ bụghị ya, anyị ga -enwe obi ụtọ ịnụ echiche gị (site na nkọwa) - n'ihe ị chere gbasara Oliver.